प्रचण्डले होइन, पैसाले जितेको हो चुनाव – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
(चितवनको ३ नं. निर्वाचन क्षेत्रबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वप्रम प्रचण्डसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका टंकनाथ रेग्मी‘गोर्खाली’ माओवादी आन्दोलनमा अपरिचित नाम होइन । दशवर्षे जनयुद्धकै प्रक्रियामा आफ्नो आफ्नो जीवन संगिनी गुमाउनु भएका गोर्खाली त्यही जनयुद्धका शीर्ष नेता समेत रहेका प्रचण्डलाई अहिले कम्युनिष्ट समेत भन्न रुचाउनु हुन्न । प्रचण्डले दशवर्षे महान जनयुद्ध, सहिदहरुको महान बलिदानमाथि धोका र गद्दारी गर्दै आमूल परिवर्तनका मुद्दाहरुसहित वर्गसंघर्षको मान्यता समेत परित्याग गरेर प्रतिक्रियावादमा पतन हुन पुगेकोले प्रचण्ड कम्युनिष्ट नरहेको उहाँको दावी छ । गणितीय खेलमा प्रचण्डसँग फराकिलो मत अन्तरले पराजित हुन पुगे पनि दशवर्षे जनयुद्ध, सहिदहरुको बलिदानको सम्मान, जनयुद्धले उठाएका मुद्दाहरुको निरन्तरता, आदर्श र मूल्यको राजनीतिका हिसाबले नैतिक रुपमा आफ्नो जित भएको दावी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ । उहाँसँगको भेटमा गरिएको महत्वपूर्ण कुराकानीलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।– सं.)
गणितीय परिणामका हिसाबले प्रचण्डको जीत भए पनि नैतिकता, आदर्श, मुल्यमान्यता र दश वर्षको जनयुद्धका मुद्दा र बलिदानको सपनाका हिसाबले मेरो जित भएको छ । यो अग्निपरीक्षामा म पास भएको छु । माओवादी केन्द्र दक्षिणपन्थी संशोधनवादी यात्रा गर्दै प्रतिक्रियावादमा पतन हुन पुग्यो । उसले जनयुद्धका सबै एजेण्डाहरु परित्याग ग¥यो । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका मुद्दाहरु सडकमा मिल्क्याइ वर्ग संघर्षको बाटो छाडेका हुनाले माके कम्युनिष्ट पार्टी नै थिएन । कहिले राप्रपा, कहिले काँग्रेस त कहिले एमालेसँग मिलेर उसले आफ्नो वास्तविक चरित्र प्रदर्शन गरिसकेको छ । यही पृष्ठभूमिमा भएको निर्वाचनमा मैले प्रचण्डलाई चुनौति दिँदै उम्मेदवारी दिएँ, र उनलाई नैतिक रुपमा पराजित गरेँ ।